Hello Nepal News » जीवनमा खुसी हुन यसो गरौं
जीवनमा खुसी हुन यसो गरौं
संसारमा हामी आफूलाई भन्दा अरुलाई खुशी र सुखी देख्छौं । त्यस्तै अरुको सुन्दरताको सधैं बयान गर्छौं । अरुले लगाएको पहिरन धेरै सुहाएको महसुस हुने, अरुले गरेको मेकअप र हेयर स्टाइलले भिन्दै देखिने र आफूलाई जे गरे पनि राम्रो नै देखिँदैन । उसले केही नगर्दा पनि कति राम्री, आफूले विभिन्न उपाय अपनाउँदा पनि कहिल्यै राम्रो नदेखिने जस्ता गुनासोहरु प्रायः मानिसहरुको, विशेष गरेर महिलाहरुको रहन्छ । यो मानवीय स्वभाव नै हो ।
सबैभन्दा धेरै सुन्दर देखिने चाहनाले हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौं । अथवा भनौं राम्रो हुने कुरामा हामी पागलपनको हदसम्म जान तयार हुन्छौं । त्यसैले हामी जस्तो देखिन्छौं । त्यसमा हामी खुशी हुँदैनौं । त्यसैले कि त आफूलाई कुरुप सोच्छौं कि त हामी आफ्नो सौन्दर्यलाई अझै धेरै सुधार्ने कोसिस गर्छौं ।
वास्तवमा यस्तो सोचाईले हाम्रो आत्म-सम्मानलाई नै घटाइदिन्छ । यदि यस्तो भावना हदभन्दा बढी भयो भने यसले हाम्रो मन र दिमागमा नराम्रो असर देखाउन थाल्छ ।
यदि अहिले तपाईं ४० वर्षको हुनुभएको छ भने संसारको कुनै पनि शक्तिले तपाईंलाई २१ वर्षको जस्तो देखाउन सक्दैन । तर हामी सजिलै यो कुरालाई कहाँ स्वीकार गर्न सक्छौ र ? आफ्नो अनुहारमा उमेरसँगै उत्पन्न हुने चाउरीपनालाई कम गर्नाका लागि हामी विभिन्न एन्टि-रिङ्कल क्रिमहरुको प्रयोग गर्न थाल्छौं । तर, ती सबै कुराले हामीले सोचे जस्तो परिणाम प्राप्त हुँदैन । किनभने उमेर बढ्दै जाँदा हामी सबै जना बुढेसकालमा प्रवेश हुनु अति नै स्वभाविक कुरा हो । यसलाई स्वीकार नगर्दा हामी आफ्नो स्वास्थसँग नै हेलचेक्य्राईं गर्न थाल्छौं ।
ब्यूटी प्रोडक्ट र कि्रमहरुले हामीलाई केवल ती उत्पादनहरुको खुबीहरुको बारेमा मात्र भन्छन् । तिनीहरुको प्रयोगबाट हुने नराम्रो असरको बारेमा केही पनि बताउँदैनन् । वास्तवमा हामीले स्वयं आफूलाई माया गर्न आफैं सिक्नुपर्छ । आफूलाई स्वयंसँग तुलना गर्ने निर्णय लिने अधिकार पनि स्वयंलाई नै दिनुपर्छ । हामी त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग ईष्र्या गर्छौं । जुन व्यक्ति मोटो देखिँदा पनि खुशी नै भइरहेको हुन्छ । एउटा मोटी युवतीले उसको ठूलो पेट देखिने गरी टप लगाएको देखेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । तर ती युवतीको हेराईमा आफू सबैभन्दा सुन्दर देखिएको उनको सोचाई हुन्छ ।
वास्तवमा हामी भित्रको भावनाले नै हामीलाई आफू स्वयंलाई माया गर्न सिकाउँछ । त्यसैले हामीलाई एउटा दृष्टि दिन्छ । यदि हामीले आफू स्वयंलाई माया गर्न सिकेनौं अथवा सकेनौं भने हामी भित्रको आत्मविश्वास चकनाचुर हुन्छ ।
हाम्रो हिम्मत टुक्रिन्छ र हामी जीवनका चुनौतीहरुको सामना गर्न असक्षम हुन्छौं । आफूले आफैंलाई मन नपराउने भावना आफैं भित्रबाट नै उत्पन्न हुन्छ । बिस्तारै-बिस्तारै त्यसले हाम्रो व्यक्तित्वलाई नै घटाइदिन्छ । त्यसरी हामी बिस्तारै-बिस्तारै स्वयं नै आफ्नो विनाश गर्न थाल्छौं । यसको विपरित जब हामी आफू स्वयंलाई माया गर्न सिक्छौं । हामी बढी रचनात्मक र सकारात्मक सोच्न थाल्छौं । त्यसैले हामी यस प्रकारको सुविधा क्षेत्र कसरी प्राप्त गर्ने ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ ।
आफूलाई स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ
म जस्तो छु, आफूलाई स्वीकार गर्छु भन्ने कुरा आफू स्वयंलाई बारम्बार भन्नुहोस् । एक पटक यदि तपाईंले यो कुरालाई स्वीकार गर्नु भयो भने तपाईं भित्र एउटा नयाँ आत्मविश्वास जागृत हुन्छ । जसले तपाइर्ंले एउटा नयाँ शक्तिको अनुभव गर्नुहुन्छ ।
अरुले मूल्याकंन किन गर्ने ?
अरुमा त्यस्तो कुन योग्यता छ । जसले तपाईंको मूल्याकंन गर्न सकोस् ? तपाईं उनीहरुलाई यस्तो गर्ने छुट किन दिन हुन्छ ? आफूलाई मूल्यांकन गर्नका लागि आफ्नो मापन आफै निर्धारण गर्नुपर्छ । तपाईं कुनै प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्नुपर्छ । जसमा तपाईंको भूमिका निर्णयक रहेको छ । त्यस काल्पनिक प्रतियोगितामा आफ्नो मूल्यांकन कुनै भेदभाव बिना गर्नुपर्छ । साथै आफ्ना लागि त्यस्तो किसिमको मापन निर्धारण गर्नुहोस् । जसमा तपाईं आफू सय प्रतिशत सही निस्कनुहोस् ।
आफ्नो लक्ष्य आफै निर्धारण गर्नुपर्छ
आफू भित्र लुकेका प्रतिभा, योग्यता र धैर्यतालाई चिन्नुपर्छ । तपाइर्ंको वरपर नकारात्मक सोच भएका मानिसहरु कति छन् ? भन्ने कुराले कुनै फरक पर्दैन । तपाईंले आफ्नो बाटो आफै बनाउनुपर्छ । स्वयंसँग प्रेम गर्नुहोस् । आफ्नो जिन्दगीलाई त्यस्तो बनाउनुहोस्, जुन बिना तपाईं जीवनभर आफूलाई प्रेम गर्न सक्नु हुन्न ।
प्रकाशित मिति २४ पुष २०७६, बिहीबार १४:२८